भर्जिन गल्फ्रेण्ड प्रियालाई होटलमा चिकेको कथा
कुरा मेरो मिल्ने साथि प्रिया र मेरो हो । पहिला देखि नै मैले फोनमा चिकाईको कुरा गरेर रेखालाई मस्ती गराई राखेको थिएँ । त्यो दिन मैले होटल कोठानै बुक गरेर प्रियालाई चिक्न बोलाएँ । उ फुरुङग परेर आई । कोठामा पुगेर हामी भित्र छिर्यौ अनि मैले ढोका बन्द गरेँ । प्रिया खाटमा बसि र म पनि उसको छेउमा बसेँ । मैले बिस्तारै उनलाई अङ्गालोमा हालेर किस गर्न थालेँ। उनले पनि केहि भनिनन् । बिस्तारै मैले उनको दुधको पोका बाहिरबाटै माड्न थालेँ । उनी आँखा चिम्लेर चुपचाल बसिरहिन । मेरो लाँडो ठन्केर आउन थालिसकेको थियो । बिस्तारै मैले उनको टि-शर्ट खोल्न थाले ।
उनले “नाई नखोल्नु न” भनि । मैले उनको कुरा नसुनेझै गरेर टि-शर्ट खोलिदिएँ । उसको ब्रा पनि खोलिदिएँ । दुधको मुण्टो चुस्न थाले । एकछिन पछि उसको पाईन्ट पनि खोलिदिएँ । उसको रातो पेन्टीलाई मलाई झन सनक्क बनायो । मैले त्यो पनि खोलिदिए । अब प्रया नाङ्गै थिई । त्यसपछि मैले पनि मेरो सबै लुगा खोले । बिस्तारै किस गर्दै मैले मेरो हात उसको पुतीमा लगेर भुत्ला खेलाउन थाले । ओहो ! उसको पुती त कति मजाको रहेछ । भुक्क फुलेको पाउरोटी जस्तै । मलाई के भयो के भयो, हतार हतार उसलाई खाटमा सुताए र उसको पुती नियालेर हेर्न थाले । अहिलेसम्म कसैले नचिकेको, हेर्दै टाईट पुती । अनि बिस्तारै उसको टिसी खेलाईदिन थाले । उनी त कराउन थाली “आह्ह्ह्ह्ह्ह, ओह्ह्ह्ह्ह, उम्मम्म्म…" अनि मैले सोधे “के भयो ?” “केहि पनि भएको छैन, अलि अलि डर लागि रहेको छ” उनले भनि । “तिमीलाई मजा आई रहेको छ कि छैन ?” मैले सोधे । “आई रा'छ” उनले भनि । ५-१० मिनेट जति उसको टीसी खेलाए । उसले पुतीबाट पानी निकाल्न थाली । मेरो पुरै औलानै च्याप च्याप भयो । अनि मैले बिस्तारै मेरो लाडोलाई उनको पुतीमा हाल्न थालेँ । “ऐया, दुख्यो, नगर्नुहोस न ।” उनी कराउन थाली । “तिम्रो यो पहिलो चोटी हो प्रिया ?” मैले सोधे । “हो” उनले भनि । साँच्चै हुनु पनि हो, यस्तो टाईट पुती देखेर मेरो पनि होश हराएको थियो । “ठिकै छ, म बिस्तारै चिक्छु नि शुरूमा अलि अलि दुख्छ, पछि केहि हुन्न” मैले भनेँ र उ चुपचाप बसी ।
अनि मैले बिस्तारै मेरो लाडो उसको पुतीमा छिराउन थाले । पुतीमा छिराउनै गाह्रो भयो मलाई । तै पनि मैले बिस्तारै बिस्तारै ठेल्न थाले । उनी “ऐया ! दुख्यो, बिस्तारै” भन्दै कराउन थाली । पुतीमा नछिरेकोले मैले मेरो औलाले उसको पुती खेलाउन थाले । कहिले टीसी त कहिले पुती भित्र औला चलाउन थालेँ । उनी “आह्ह्ह्ह, अम्म्म्म, ओह्ह्हह्हह्ह, इस्सस्सस्” कराउन थाली । फेरी उनको पुतीमा पानी नै पानी भयो र अब त छिर्छ होला भनेर फेरि लाडो लगेर पुतीनिर राखेर बिस्तारै ठेल्न थाले । बिस्तारै बिस्तारै गरेरे अब आधि जति लाडो छिराए । “दुखि रहेको छ प्रिया ?” मैले सोधे । “अलि अलि” उनले भनि । त्यसपछि मैले लाडो लाई अझ भित्रसम्म ठेले । “ऐया, दुख्यो” भन्दै उनले मलाई ठेलि । मेरो लाडो स्वात्तै बाहिरै निस्कियो । प्रियाको आखाभरि आँशु देखेर मैले उसलाई फेरि किस गर्न थाले । यसो लाडो तिर हेरेको त रगत नै रगत देखे । रेखाको पुतीमा पनि रगतै रगत थियो । मैले हतार हतार मेरो रुमालले उसको पुती र मेरो लाँडो पुछे अनि उसलाई अङ्गालो हालेर दुध माड्दै चुस्न थाले । करिब ५-१० मिनेटपछि फेरि उसलाई खाटमा सुताएर चिक्न थालेँ । अहिले अलि दुख्न छाडेछ क्यार कराउन छाडी । त्यसपछि मैले मेरो चिकाईको स्पीड पनि बढाउन थालेँ । बिस्तारै बिस्तारै कस्सी कस्सी चिक्न थालेँ ।
उनलाई पनि अब त मजा आए जस्तो छ उनि पनि आखा चिम्लेर सहेर बस्न थाली । पुती धेरै टाईट भएकोले गर्दा होला चिक्न धेरै नै मजा आईरहेको थियो । वास्तविक चिकाईको मजा आज आईरहेको थियो । मेरो लाडो उसको पुतीबाट निकालेर उसलाई घोप्टो पारेँ । कुकुरले चिकेको जस्तै गरेर उसको खुट्टा फार्न लगाएर बिस्तारै उसको पुतीमा लाडो छिराउन थाले । “ऐया, यसरी त दुख्ने रहेछ, नाई अघि जस्तै गर्नुस न” प्रिया कराउन थाली । “केहि हुन्न, एक छिन त हो नि” मैले भनेर बिस्तारै चिक्न थाले । एकछिनपछि अलि स्पीडले चिक्न थाले । “ऐया, आह्ह्ह…” प्रिया कराउन थाली । तैपनि मैले कस्सी कस्सी चिक्न थाले । केहि बेर चिकेपछि मेरो लाडोले माल झार्न लाग्यो । खै मलाई के भयो भयो मलाई लाडो झिक्नै मन लागेन र मैले मेरो माल उसको पुती भित्रै झारिदिएँ। प्रया सुँक्क सुँक्क गर्दै आँशु झार्न थालि । “नरोउ न, यस्तै हो अलि अलि दुख्छ । मजा आयो कि आएन भन त?” मैले सोधे । रुञ्चे स्वरमा “मजा त धेरै आयो तर दुखि रहेको छ । फर्स्ट टाईम हो, यस्तो मजा आउने थाहा नै थिएन” उनले भनि । “फेरि एक पटक चिकौ त त्यसो भए” मैले सोधे । “नाई आज यतिनै, बरू अर्को पल्ट अलि धेरै चोटी गरौला नि हुन्छ ?” उनले भनि र मैले पनि “हुन्छ” भन्दै उनलाई चुम्बन गर्न थाले । केही क्षणपछि हामी लुगा लगाएर काउन्टरतिर गएर पैसा तिरेपछि उसलाई घर छोड्न बानेश्वर तिर लागेँ ।
जे होस त्यो दिन चिक्न धेरै मजा आयो । भर्जिन पुती पनि फुटाईयो । टाईट पुती चिक्नु नै मेरो लागि स्वर्ग गए बराबर भएको थियो । फेरि पनि चिक्ने प्लान छ, चिके पछि मेरो अनुभव तपाईहरू समक्ष राख्नेछु । कृपया यो साइट हेर्दै गर्नुहोला ।
भर्जिन गल्फ्रेण्ड प्रियालाई होटलमा चिकेको कथा 2016-10-03T23:31:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Bikas Gurung
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: भर्जिन गल्फ्रेण्ड प्रियालाई होटलमा चिकेको कथा